Kawasaki Ninja 650R 2012 အိန္ဒိယတွင်စျေး & Specifications | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, pictures, ratings, reviews and discusssions
ATV ရင်းမြစ် - သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - Nac ရဲ့ / Cannondale POS ... (36185)
Bajaj Avenger 220: တစ်ဦးကဘက်စုံပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ကယ် Blo ... (9934)
MZ စမှတ်စုများ - Philadelphia တွင်မွငျးစီးစဝီကီ (9638)
KTM ပြိုင်ပွဲဘလော့ (8280)
Peugeot မြန်နှုန်း Fight2အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲလက်စွဲစာအုပ်ပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန် ... (7355)
ဟွန်ဒါ Wave ကို 125 လက်စွဲပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန်စာအုပ်များပြန်လည်ပြုပြင် (7308)
Kawasaki ZXR 750 - မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, သတင်း & Advi ... (7296)
Yamaha ထုတ်လုပ်မှု Tesseract ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်? RideA ... (6680)
Pampanga အဘိဓါန် Karylle Solana နိုင်ငံ H ကိုခုနှစ်တွင်အိမ်လော ... (5897)
ဟွန်ဒါ 1960 ကနေခြောက်လဆလင်ဒါဆိုင်ကယ် rc166 (5874)
KTM Duke 125/200 RaceDynamics PowerTRONIC afte ရ ... (5548)
နေအိမ် → Kawasaki → Kawasaki Ninja 650R 2012 Price in India & Specifications
20 Jun 2015 | စာရေးသူ: dima | ဟာ Off comments အပေါ် Kawasaki Ninja 650R 2012 အိန္ဒိယတွင်စျေး & Specifications
Kawasaki Ninja 650R 2012 အိန္ဒိယတွင်စျေး – Specifications
Bajaj Auto has introduced the all new 2012 edition of the Kawasaki Ninja 650R superbike last week. သင်၏ရှင်ဘုရင်သည်သတင်းအချက်အလက်အတွက် Bajaj ယခုအချိန်အထိရောင်းချပြီ 3,000 အဆိုပါ Ninja မိသားစုထဲမှာယူနစ်, ပထမဦးဆုံးအရာနှစ်အတွင်းစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည့် 2009. နောက်ဆုံးပေါ် 2012 မော်ဒယ်ဇွန်လအတွက်မိတ်ဆက် Ninja 650R ၏ပစ်လွှတ်အောက်ပါအတိုင်း 2011.
ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုသိသည့်အတိုင်း, အဆိုပါ Kawasaki ရူပီးအကြားအရွယ်ရှိအဆိုပါအားကစားစက်ဘီးအစိတ်အပိုင်းအတွက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်2to5တစ်ဦးကစျေးကွက်ဝေစုနှင့်အတူသိန်း 65 ရာခိုင်နှုန်းကို. ဒါက Kawasaki Ninja 250R နှင့် KTM ပြီးနောက်နိုင်ငံအတွင်းရှိမိတ်ဆက်တတိယပရီမီယံအားကစားမော်တာဆိုင်ကယ်ဖြစ်ပါတယ် 200 Duke. အဘယ်သူမျှမသံသယက၎င်း၏စတိုင်နှင့် configuration ကကုန်ကျစရိတ်ထက်ကျော်လွန်သွားပါလိမ့်မယ်.
Kawasaki Ninja 650R 2012 Specifications
Four-stroke, အရည်-အအေး, DOHC, လေးအဆို့ရှင်, အပြိုင်အမွှာအင်ဂျင်ကို
649 cc ရွှေ့ပြောင်းခံရ
72 ဆာ @ 8500 RPM အများဆုံးပါဝါ
83.0 မီလီမီတာဆလင်ဒါထွင်းဖေါက်ခြင်းနှင့် 60.0 စတုတ်မီလီမီတာ
Front -120 / 70-17 ZRI7M / ကို C (58W က), နောက်ဘက်-160 / 60 – 17 ZRI7M / ကို C (69W က) အဝတ်အစား
Single 220 တစ်ခုတည်းပစ္စတင် caliper ဘရိတ်နှင့်အတူမီလီမီတာပွင့်လွှာနောက်ဘက် disc ကို
41 မီလီမီတာအဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းချိတ် / 120 mm front suspension
This isastylish bike having curb weight of 460.8 ပေါင်နှင့် 31.7 seat heights. It has overall length of 83.1 တွင်, width of 30.3 in with 46.5 in height. This superbike comes in metallic spark black, candy lime green, and passion red flavors.
Kawasaki Ninja 650R 2012 အိန္ဒိယတွင်စျေး . The 2012 edition 649 cc superbike from Kawasaki will be available through ProBiking outlets across the country ataprice of Rs. 4,99,834/- (ex-showroom in Delhi).
Kawasaki Z750R : The Kawasaki Z750R naked Bike will be available soon in showrooms withaprice tag of Rs7သိန်း (Expected) အိန္ဒိယမှာ. It has 4-stroke Liquid-cooled748 cc petrol engine and features 16 In-line valve (DOHC Valve Mechanism) connected Digital Ignition technology.
Kawasaki Ninja 650R 2012 ဗီဒီယိုကို:
We will send you some more information related to Kawasaki Ninja 650R 2012 အိန္ဒိယတွင်စျေး – Specifications
Kawasaki Z1000 – ဝီကီပီးဒီးယား, အခမဲ့စွယ်စုံကျမ်း
2011 Kawasaki Vulcan 1700 Vaquero – မော်တော်ဆိုင်ကယ် Cruiser မဂ္ဂဇင်း
Kawasaki 1400 GTR review: 600 မိုင်အတွက် 24 hours. By Paul Hood – Cars and…
20.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Kawasaki: Kawasaki နှင့်အတူ 1000 kavasaki z 400
Ducati Desmosedici GP11 ဟွန်ဒါ DN-01 ဆူဇူကီး Colleda CO အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype Moto Guzzi 1000 Daytona Injection စမတ် eScooter Ducati 60 Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို ဆူဇူကီး AN 650 Aprilia Mana 850 တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် Ducati Diavel မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto Bajaj Discover သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix Brammo Enertia ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို စက်ဘီး Kawasaki ER-6n
Yamaha YZF-R125 ဆိုင်ကယ် – Prices, Reviews, Photos, မိုင်အကွာအဝေး ...
စက်ဘီး, Parts, ပစ္စည်းများ, Servicin ...
သင်္ဘော MV Agusta F4 1000 S – Road Test & Review – ဆိုငျကယျသမားအွန်လိုင်း
The 2009 Harley Davidson လမ်းမကြီးမှာဘုရငျ – Yahoo ကအသံများ – voices.yahoo.com
ထိပ်တန်း 10 Motorcyles တစ်ဦးက Man wow Tech မှသတ်မှတ်ချက်များဆင့်ဆိုရမည်မှာ Make, Reviews, သတင်း, Price…